33kV/35kV ထုတ်လုပ်သူများ - China 33kV/35kV စက်ရုံ၊ ပေးသွင်းသူများ
●Voltage ：35kV ● Material： Q255B/Q355B/Q420 ● Hot dip galvanizing ● ပုံဆွဲခြင်းအနေဖြင့် လျှပ်စစ်စက်မှုလုပ်ငန်းလိုအပ်ချက်များကို ဆောင်ရွက်ပေးရာတွင် အောင်မြင်သော သွယ်တန်းမျှော်စင်၏ ဒီဇိုင်းနှင့် တီထွင်ဖန်တီးမှုတွင် ကျွမ်းကျင်မှုရှိပါသည်။ ဤဂီယာလိုင်းတာဝါတိုင်များကို ကျွန်ုပ်တို့၏ဖောက်သည်များ၏ ဒီဇိုင်းလိုအပ်ချက်နှင့်အညီ ထုတ်လုပ်ထားပြီး ချို့ယွင်းချက်လုံးဝမရှိရန်နှင့် အကောင်းဆုံးလုပ်ဆောင်နိုင်စွမ်းကိုသေချာစေရန် တင်းကျပ်သောအရည်အသွေးစစ်ဆေးခြင်းကို ခံယူထားသည်။ ● 8000 Sq. ကရိန်းများဖြင့် အလုပ်ရုံ မီတာများ။ ● လုံလောက်သော သိုလှောင်ရုံနှင့် ပက်ကေ့ခ်ျ...
33kV နှစ်ဆ circuit ဂီယာလိုင်းတာဝါ
ဂီယာတာဝါသည် မြင့်မားသောဖွဲ့စည်းပုံဖြစ်ပြီး အများအားဖြင့် သံမဏိရာဇမတ်မျှော်စင်တစ်ခုဖြစ်ပြီး အပေါ်မှ ဓာတ်အားလိုင်းကို ပံ့ပိုးရန်အတွက် အသုံးပြုသည်။ ကျွန်ုပ်တို့၏အကူအညီဖြင့် ဤထုတ်ကုန်များကို တင်ဆက်ပါသည်။
ကျွန်ုပ်တို့၏အားသာချက်မှာ လျှပ်စစ်စက်မှုလုပ်ငန်းလိုအပ်ချက်များကို ဖြည့်ဆည်းပေးရာတွင် အောင်မြင်သော သွယ်တန်းခြင်းမျှော်စင်၏ ဒီဇိုင်းနှင့် ဖန်တီးထုတ်လုပ်ခြင်းတွင် ကျွမ်းကျင်မှုရှိသည်။ ဤဂီယာလိုင်းတာဝါတိုင်များကို ကျွန်ုပ်တို့၏ဖောက်သည်များ၏ ဒီဇိုင်းလိုအပ်ချက်နှင့်အညီ ထုတ်လုပ်ထားပြီး ချို့ယွင်းချက်လုံးဝမရှိရန်နှင့် အကောင်းဆုံးလုပ်ဆောင်နိုင်စွမ်းကိုသေချာစေရန် တင်းကျပ်သောအရည်အသွေးစစ်ဆေးခြင်းကို ခံယူထားသည်။ ●8000 Sq. ကရိန်းများဖြင့် အလုပ်ရုံ မီတာများ။ ● လုံလောက်သော သိုလှောင်ရုံနှင့် ပက်ကေ့ခ်ျနန်းတော်။ ● အတွေ့အကြုံရှိသော အင်ဂျင်နီယာများနှင့် အရည်အချင်းပြည့်မီသော အလုပ်သမားများ။ ● စိတ်ကြိုက်...
ထောက်ပံ့နိုင်မှု- တစ်နေ့လျှင် တန်ချိန် 80/တန်
လျှပ်စစ်သံမဏိမျှော်စင်အတွက် သို့မဟုတ် ဖောက်သည်၏လိုအပ်ချက်အဖြစ် ပလပ်စတစ်စက္ကူဖြင့်ထုပ်ပိုးခြင်း။